यस्तो ठाउमा यसरी मा’रिएका रहेछन नवराज र उनका साथीहरु ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारयस्तो ठाउमा यसरी मा’रिएका रहेछन नवराज र उनका साथीहरु !
छोरीले ढि’पी गरेपछि हुन्छ भन्ने मु’डमा आफूहरु पुगेको अभिभावक बताउँछन् । त्यसैले नवराज शनिबार राति आफ्ना साथीहरुलाई लिएर दुलही ल्याउन सोती गएका थिए ।पटक–पटक मा’नसिकरूपमा त’नाव र शा’रीरिकरूपमा कु’टपिट व्यहोरोका नवराजलाई शनिबार ठूलो सङ्ख्यामा साथी लिएर आउनु भनी युवतीले सल्लाह दिएका कारण सोहीअनुसार १९ साथी लिएर सोती गएका थिए । जब उनीहरु घर नजिकै पुग्दा युवतीभन्दा, युवतीकी आमाको नजर युवामा प-यो । त्यसपछि उनले ‘जति पिटाइ खाए पनि केही लागेन है, फेरि आइस् आज त मा’रेर फा’लिन्छ’ भन्दै गाउँका मानिसलाई बोलाएपछि युवामाथि कु’टपिट सुरु भएको घा’इते युवा आशिष विकले बताए ।
कु’टपिट सुरु हुँदै गर्दा आफूहरु भा’गेर करिब चार किलोमिटर दूरी पार गरेको आशिषको भनाइ छ । ल’खेटी–लखेटी भेरी नदीसम्म पु-याउँदा धेरै साथी घा’इते भएको उनको दा’बी छ । नवराजको शनिबार नै मृ’त्यु भयो भने ज्यान ब’चाउन नदीमा हा’मफालेका मध्ये चौरजहारी नगरपालिका–१ टीकाराम सुनार र भेरी नगरपालिका–४ का गणेश बुढाको पानीमै डु’बेर मृ’त्यु भयो । कु’टाइबाट घा’इते भएका युवाले पानीमा पौ’डिन नसक्दा मृ’त्यु भएको घा’इतेले बताएका छन् । अन्य भेरी नगरपालिकाका सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाही अहिले पनि बे’पत्ता छन् ।
भोलिदेखि साझा यातायात सञ्चालन हुने